10/08/13 ~ Myanmar Forward
Miss Universe Myanmar ဆုရှင် မိုးစက်ဝိုင် ကိုယ်ပိုင် Facebook အကောင့်ဖွင့်တော့မည်
မိုးစက်ဝိုင်နာမည်နဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ facebook စာမျက်နှာတွေ အားလုံးဟာ သူ ဖွင့်ထားတာ မဟုတ်တဲ့အပြင်၊ သူ့ကိုယ်ပိုင် facebook စာမျက်နှာကို ဒီနေ့ညကျမှသာ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ မယ်စကြဝဠာ ပြိုင်ပွဲအတွက် တာဝန်ယူ ထားတဲ့ Hello Madam အဖွဲ့အစည်း နဲ့သာ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ၊ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်လက် လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ Miss Universe Myanmar2013 ဆုရထားတဲ့ ဆုကြေးငွေတွေကို ပရဟိတ လုပ်ငန်းတခု ထူထောင်ပြီး ဆောင်ရွက် သွားဖို့ ရှိကြောင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ကာရာအိုကေဆိုင်ပိတ်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို မိတ္ထီလာလေတပ်မှ တပ်မတော် သားများ နှောင့်ယှက်ခဲ့သည့်အတွက် တပ်ထိန်းမှ သွားရောက် ဖြေရှင်းခဲ့ရ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့တွင် ကာရာအိုကေဆိုင်ကို ပိတ်သိမ်းခဲ့သည့် ရဲစခန်းတာဝန်ရှိ သူများကို လေတပ်စခန်းမှ တပ်မတော်သားများက နှောင့်ယှက် ခဲ့သည့်အတွက် တပ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ မှ သွားရောက် ထိန်းသိမ်းဖြေရှင်းပေးရသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအောက် တိုဘာ၂ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အခင်းဖြစ် ရဲစခန်း၏ ပြောကြား ချက်အရ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အောက်တိုဘာ ၂ရက် ည၁ဝနာရီ မိနစ် ၅ဝတွင် မိတ္ထီလာ အမှတ် (၃)ရဲစခန်းကို တပ်မတော် (လေ) ရှမ်းတဲမှတပ် ဖွဲ့ဝင် ၁၁ဦးရောက်ရှိလာပြီး ရန် ကုန်- မန္တလေးကားလမ်းဘေးရှိ အေဝမ်းစားသောက် ဆိုင်မှ ကာရာ အိုကေခန်းကို ရဲစခန်းမှပိတ်သိမ်း ထားသည်ဆိုသည်မှာ ဟုတ်မဟုတ်မေးမြန်းရာတွင် စခန်းမှူးက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ပိတ်ထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန် လည်ဖြေကြားရာတွင် ပြဿနာ စတင်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''လေတပ်စခန်းက တပ်သား တွေလာပြီး ပြဿနာရှာသွားတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို တပ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့က စစ်စည်းကမ်း နဲ့အညီ အရေးယူသွားမယ်လို့ပြော သွားပါတယ်''ဟု အောက်တိုဘာ ၅ရက်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှု ကို မိတ္ထီလာအမှတ်(၃)ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူက အတည်ပြုပြော သည်။
မိတ္ထီလာမြို့နယ် တပ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဗိုလ်ကြီးဟန်ထွန်းက ''အမှတ်(၃) ရဲစခန်းမှာ ပြဿနာ ဖြစ်နေတယ် ကြားလို့ ကျွန်တော်တို့ တပ်ထိန်းအဖွဲ့က သွားရောက် ထိန်းသိမ်းဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်စည်း ကမ်းနဲ့ အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက် ခုံ ရုံးဖွဲ့ပြီး စစ်ဆေးသွားမှာပါ'' ဟု ပြောသည်။
ယင်း ပြဿနာဖြစ်ပွားမှုတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဘဲ ရဲစခန်း နယ်နိမိတ် အတွင်း တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကို တပ်မတော်လေ တပ်စခန်းမှ တပ်သားများက အကျီ င်္ ဆွဲခြင်း၊ မချေမငံ ဆက်ဆံခြင်းများသာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ယင်းအခြေအနေများ ဖြစ် ပေါ်ခဲ့သည့် တပ်သား ၁၁ဦးကို မိတ္ထီလာတပ်နယ် တပ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ မှ ဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦးက ဦးဆောင်ကာ ထိန်းသိမ်းခေါ်ဆောင် သွားပြီး စစ်စည်းကမ်းနှင့်အညီအရေး ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးတင်လှိုင် ၊ ငယ်ထွေး (ကလေး) - Yangon Media Group
ရန်ကုန် ၊ အောက်တိုဘာ ၇။ ။ ရခိုင် ပြည်နယ် သံတွဲမြို့နယ်တွင် ဘာ သာရေးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများဖြစ် ပွားမှုကြောင့် ရန်ကုန်-သံတွဲပြေး ဆွဲနေသော ယာဉ်လိုင်းတချို့မှာ ဘာသာခြားတင်ဆောင်ခြင်းကို ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ကြိုတင် ဘွတ်ကင်ဖြင့် လက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း ကိုလည်း လက်မခံတော့ကြောင်း ရန်ကုန်-သံတွဲပြေးဆွဲလျက်ရှိသည့် ယာဉ်လိုင်းဂိတ်များထံမှ သိရသည်။
''ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဆိုရင် ဘယ်လိုလူက ဝယ်မှန်းမသိလို့ မရောင်းဘူး။ လာဝယ်ရင်လဲ ဝယ် တဲ့သူကို ကြည့်ပြီး ရောင်းသင့်တယ် ထင်တဲ့သူကိုပဲ ရောင်းတယ်''ဟု ရန်ကုန်-သံတွဲ ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲ သူတစ်ဦး ကပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပဋိပက္ခများဖြစ် ပေါ်လျက်ရှိသော်လည်း သံတွဲမြို့ သို့သွားရောက်သည့် ခရီးသည် များမှာ လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိ သည့်အပြင် ယခင်ကထက် ခရီးသွားသူ ပိုများလာကြောင်း အောင်သစ္စာ ကားဂိတ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက ပြောသည်။
''ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန် နဲ့သံတွဲကို အသွားအပြန်သွားဖြစ် ကြတာများတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် တော့ မိုးတွင်းမှာသွားလာမှုနည်း တယ်။ သံတွဲမှာပြဿနာပေါ်လာ တော့ သွားကြသူတွေများလာ တယ်။ ကားတစ်စီးမှာ ခရီးသည် ၃ဝလောက်ရှိတယ်။ နှစ်စီးဆွဲတယ် ဆိုတော့ ၆ဝကျော်လောက်တော့ သွားဖြစ်ကြ တာပေါ့။ ခုလို ပြ ဿနာတွေ ထပ်ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ် တာတို့ရှိတယ်။ ဖြစ်လာရင်တော့ ပိတ်လိုက် ရတော့မှာပဲ''ဟု ယင်း ကထပ်မံပြောသည်။
တချို့သောယာဉ်လိုင်း များမှာ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ပါရှိ ပါက ဘာသာခြားတင်ဆောင်ခြင်း မျိုးရှိသော်လည်း ယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ယူသူအား လက်မှတ်ရောင်းသင့် မရောင်းသင့်ကြည့်ပြီးမှ ရောင်းကြခြင်း မျိုးလည်း ကြာင်း ရန်ကုန်မှ သံတွဲသို့ပြေးဆွဲနေသည့် ယာဉ်လိုင်းတချို့ထံမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်-သံတွဲသို့ ခရီးသည် တင်ယာဉ်များပြေးဆွဲရာတွင် အဆင်ပြေမှုများ ရှိစေရန်အတွက် လုံခြုံရေး အင်အားများကိုလည်း အပြည့်အဝယူထားကြောင်း သံတွဲမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှတာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က စက်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တစ် ဆိုင်ရှေ့ သုံးဘီးဆိုင် ကယ်တစ်စီး ရပ်ထားသည့် အတွက် ရင့်သီးစွာ ဆဲဆိုပြောဆိုကြရာမှ အစပြုဖြစ် ပွားခဲ့သည့် သံတွဲမြို့နယ်အတွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု မှာ အောက် တိုဘာ ၃ ရက်တွင်မှ ဒေသအခြေ အနေအနည်းငယ် တည်ငြိမ်သွား ခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် လူနေအိမ် ၁၀၀ ကျော်၊ ဗလီနှစ် လုံးနှင့် ဈေးဆိုင် တစ်ဆိုင် တို့ မီး ရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပြီး လူပေါင်း ၅ဝဝခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရ ကြောင်း၊ ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် သံ သယရှိသူ ၄၄ဦးကိုလည်း သက် ဆိုင်ရာမှ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဇင်မျိုးထက် ၊ စိုးချစ်ချစ်ပိုင် - Yangon Media Group
တော်တော်များများ ဖြစ်ကြမှာပါ။ စာကျက်ရင်တော့ အလွတ်မရပဲ သီချင်းကျတော့ တစ်ခါနားထောင်ရင် အလွတ်ရသွားတာတို့။ သုံးလေးခါ နားထောင်တာနဲ့ အလွတ်ရသွားတာတို့ ပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါ ကောင်းတဲ့ အမှုအကျင့်ပါ။
အဲ့ဒီလို သီချင်းစာသား အလွတ်ရပြီး၊ ပြန်လည်သီဆိုနိုင်သူက ဦးနှောက်ကို ကျန်းမာရေး ကောင်းစေပြီး အတိတ်မေ့ရောဂါ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ မဖြစ်အောင် တားဆီးကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သီချင်းကိုကြိုက်လည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ နားထောင်တာလည်း အခေါက်ပေါင်း အရေအတွက် မနည်းတော့ဘူး။ လိုက်လည်း ဆိုဖြစ်တယ်။ တစ်ယောက်တည်း မကြည့်ပဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ဆိုကြည့်တဲ့အခါကျ ဟိုမေ့ဒီမေ့ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန် ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သီချင်းစာသားများ အလွတ်ရခြင်းကို ဦးနှောက်နှင့် ဆက်စပ် ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ ပေးစွမ်းစေကြောင်း သိရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အဆိပ်ပြင်းဆုံးငါးက ဂျပန်တို့အတွက် အစားအစာ ဖြစ်နေ
Fugu ငါးဟင်းဟာ ဂျပန်မှာ နာမည်ကျော်ဟင်းလျာတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဟာ ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး သက်ရှိ သတ္တဝါစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်တယ် လို့ သိရပါတယ်။
ငါးပူတင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဂျပန်ခေါ် Fugu ဟာ pufferfish တစ်မျိုး ဖြစ်ပါ တယ်။ ယင်းငါးဟာ ပင်လယ်ပျော် ငါးဖြစ်ပြီး သူ့အဆိပ်ကို ဘယ် သက်ရှိ သတ္တဝါမှ မခံနိုင်ပါဘူး။ ရေနေ သတ္တဝါချင်းဖြစ်တဲ့ ငါးမန်း တွေတောင် မစားရဲတဲ့ ငါး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဂျပန်မှာကျတော့ စားသောက်ဆိုင် များရဲ့ ဟင်းလျာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီအတွက် ဂျပန်အစိုးရမှလည်း တားမြစ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ပေးထား တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ လိုင်စင်ရှိပြီး စာဖိုးမှူးများသာ ယင်းငါးများကို ချက်ပြုတ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ယင်းငါးဟင်းလျာကို ရောင်းချဖို့အတွက်လည်း ဆိုင်ကော၊ ရောင်းသူမှာပါ လိုင်စင်ရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆို ငါးရဲ့  အဆိပ်ရှိတဲ့ အပိုင်းကို တော်ရုံလူ မဖယ်နိုင်ပါဘူး။ ယင်း အဆိပ်ကို ဖယ်ပြီးရင်တောင် ကျန်တတ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်တမ်းရ ဂျပန်မှာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကနေ သက္ကရဇ် ၂၀၀၆ အထိ အက်ဆီးဒန့် ဖြစ်သူ အရေအတွက် ၇၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး ၆ ဦးထက် မနည်း သေ ဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တော့ Fugu ငါးအဆိပ်အတွက် ဖြေဆေးမတွေ့သေးပါဘူး။ သူ့ အဆိပ်က အိမ်သုံး ပိုးသတ်ဆေး ဆိုင်ယာနက်ထက် အဆ ၂၀၀ မက ပြင်းပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အသက်ရှူရပ်၊ နှလုံးခုံ ရပ် စေပါတယ်။ အက်ဆီးဒန့်မှာ အသက်ရှင်ကျန်ရတဲ့အကြောင်းက အဆင့်ပေါင်းများစွာ စစ်ဆေး ချက်ပြုထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှလည်း ဆေးဝါး များ ရှာဖွေ ဖန်တီးလျက် ရှိပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Fugu ငါးတစ်ကောင် ဟင်းလျာကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်များမှာ ရောင်းချလျက် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကလည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခဘေးဒဏ်ခံနေရတဲ့ ကလေးငယ်ပေါင်း ၁ သိန်းကျော်ရှိပြီး ကလေးငယ်တွေရဲ့ အကျိုးအတွက် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (ယူနီဆက်ဖ်)က တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်နဲ့ ခုလဆန်းပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း သံတွဲမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ နေအိမ်တွေ မီးရှို့ခံရမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်အခြေစိုက် ယူနီဆက်ဖ်ရုံးရဲ့ မနေ့က ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ခုလိုတောင်းဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် အိုးအိမ်တွေ စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရာမှာ ရွှေ့ပြောင်းခံ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေသာ ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီး ကလေးငယ်တွေ မိသားစုတွေနဲ့ ရပ်ရွာလူထုတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို ပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ခုချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးငယ်တွေအားလုံးအတွက် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ယူနီဆက်ဖ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဘာထရန် ဘိန်းဗဲလ်က ကြေညာချက်မှာ ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခမှာ အခက်အခဲဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကလေးငယ်ပေါင်း ၁ သိန်းကျော်ရှိပြီး ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေကြရတယ်လို့ ယူနီဆက်ဖ် ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဦးရဲလွင်ဦးက ပြောပါတယ်။
“ကမ္ဘာ့ကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးကို ဂျနီဗာမှာ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံပဲ။ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တော့ ကလေးတွေအခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တာ မှန်သမျှကို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အခုဒီဒေသမှာ ကလေးသူငယ် တသိန်းစွန်းစွန်းလောက်က အရမ်းဖက်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျောင်းနေထိုင်ရေး၊ ပညာသင်ကြားရေး၊ မိသားစုတွေနဲ့ အတူနေထိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ နောက်ထက် မဖြစ်ပွားဖို့အတွက် ယူနီဆက်ဖ်က တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့အတွက် အခုလို ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ရတာပါ။ ”
ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးတွေကို ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးငယ်တွေအားလုံးအပေါ် အနုတ်လက္ခ ဏာဆောင်တဲ့ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်သူတွေကို တရားဥပဒေနဲ့ အညီ အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ကိုလည်း ယူနီဆက်ဖ်က တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ၂၀၁၂ ဇွန်လက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူအုပ်စုတွေအချင်းချင်း အကြမ်းဖက် မီးရှို့ မှုတွေကြောင့် လူပေါင်း ၂ သိန်းလောက် ပဋိပက္ခ ခံစားနေကြတာရတာဖြစ်ပြီး အများစုဟာ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်တွေက သံတွဲမှာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အတွင်းမှာတော့ လူ ၅ ဦးသေဆုံးပြီး အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော် မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင် အောင်ဆန်းဟု အမည်သတ်မှတ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင်ဖြစ် မြောက်ရေးအဖွဲ့က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအမည်ကို 'အောင်ဆန်း'ဟု သတ်မှတ် အတည်ပြုလိုက် ကြောင်း ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ဝင် ဦးမင်း ထင်ကိုကိုကြီးက ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ်သို့ပြောသည်။
ယမန်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ် သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားနှင့် ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် အဖွဲ့ဝင် များဖြစ်ကြသော ဦးမင်းထင် ကိုကိုကြီး၊ ဦးဝိုင်း၊ ဦးဝေဠုကျော်၊ ဒေါ်အိအိ ခိုင်၊ဒေါ်ကြည်ဖြူသျှင်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ကြ ပြီးနောက် ဇာတ်ကားအမည်ကို အတည်ပြုနိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇာတ်ကားထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်အင်္ဂလန် နိုင်ငံတို့မှ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်သွယ်၍တာဝန်ယူထုတ်လုပ်မည့် ကုမ္ပဏီ အားအပြီးသတ် ရွေးချယ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရာ၌ အဓိကပါဝင်သရုပ် ဆောင်မည့် ကျော်ကျော်မျိုးနှင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း၏ဇနီးဒေါ်ခင်ကြည်နေရာတွင် ပါဝင်သရုပ် ဆောင်မည့်ဇာခြည်လင်းတို့အားစခန်းသွင်းလေ့ကျင့် ပေးရန်အတွက်ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
''ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အောင်ဆန်း ဆိုတဲ့အမည်ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုရင် ထိန်လင်း၊ ထိန်လင်းပြီးတော့ အောင်ဆန်း၊ အောင်ဆန်းပြီးတော့ သခင်အောင်ဆန်း၊သခင် အောင်ဆန်းပြီးတော့ ဗိုလ်တေဇ၊ ဗိုလ်တေဇပြီး တော့ ဦးအောင်ဆန်းဆိုပြီးရှိခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု အရ၊ အသက်အရွယ်အရ ရှေ့ကနာမည် တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ မပြောင်း တာက အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ဟာပဲလေ။ အဲဒါ ကြောင့် သူ့ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကို အခြေခံတဲ့ရုပ်ရှင် အဖြစ် နှစ်နာရီခွဲစာ၊ သုံးနာရီစာလောက် ရိုက် မယ်ဆိုတော့ အောင်ဆန်းဆိုတဲ့နာမည်အပြင် အခြားနာမည်ကိုစဉ်းစားလို့မရဘူး။ ဒီအောင်ဆန်း ဆိုတဲ့နာမည်ကသာ အခြားနာမည်တွေထက်ပိုပြီး သင့်တော်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်လေ။ အထူး သဖြင့်ကိုယ်ကလဲ အဲဒီအောင်ဆန်းဆိုတဲ့နာမည် ကိုတော်တော်သဘောကျတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကလဲ သဘောတူတယ်။ အဲဒါကြောင့် အောင်ဆန်းဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်သွားတာပါ။ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားနာမည်အကြောင်းက ခုမှဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ တာပါ''ဟု ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောသည်။
ကမ္ဘာကျော်သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ နှင့် ဘဝအစိတ် အပိုင်းများကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည် ရိုက်ကူးရာတွင် သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည်များကို ဇာတ်ကားအမည်ဖြင့်တိုက်ရိုက် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်းများရှိခဲ့ပြီး အမေရိကန် သမ္မတဟောင်းလင်ကွန်း၏အကြောင်းကိုရိုက်ကူး ခဲ့သည့်လင်ကွန်း ဇာတ်ကား၊ အိန္ဒိယခေါင်းဆောင် ဂန္ဒီအကြောင်းရိုက်ကူးထားသည့် ဂန္ဒီဇာတ်ကား နှင့်လက်တင်အမေရိက တော်လှန်ရေးခေါင်း ဆောင်ချီဂွေဗားရားအကြောင်းရိုက်ကူးထားသည့် ချီဇာတ်ကားတို့မှာအောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ကြသည်။
ဆုဟမ် - The Union Daily
ကလေးမြို့၌ ရေဘေးကြောင့် ပျောက်ဆုံးသူ ခုနစ်ဦးထိ မြင့်တက်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးမြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ လကုန်ပိုင်းခန့်က မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် တောင်ကျချောင်းရေများ ကျဆင်းပြီး မြစ်သာမြစ်နှင့် နေရဉ္ဇရာ... မြစ်ရေလျှံ တက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ရေကြီးမှုများကြောင့် မူလပျောက်ဆုံးသူ သုံးဦးခန့်မှာ လက်ရှိတွင် ခုနစ်ဦးခန့်အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ကလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး သိန်းဝင်းက The Voice သို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“အခုထိ အလောင်း ပြန်ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ အလောင်း မတွေ့တဲ့အတွက် သေဆုံးစာရင်းထဲ ထည့်လို့မရဘူး။ ပျောက်ဆုံးတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ရမယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ ပျောက်ဆုံးသူများမှာ ကလေးမြို့ စမ်းမြို့ရပ်ကွက်နေသူ နှစ်ဦးနှင့် စခန်းကြီးကျေးရွာမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးတို့ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ခုနစ်ဦးဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူများကို အသက် ၁၈ နှစ် အောက်ဖြစ်ပါက ငါးသောင်းကျပ်၊ အသက် ၁၈ နှစ် အထက်ဆိုပါက တစ်သိန်းကျပ် သတ်မှတ် ကူညီပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော တောင်ကျ ချောင်းရေကြောင့် ကလေးမြို့နယ်၊ နတ်ကြီးကုန်း ကျေးရွာအနီးရှိ ဘုံးချောင်းအနီး တောင်ယာအခင်းတဲ ၄၀ လုံးခန့် ရေမျောပါသွားခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး လူသုံးဦးနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ပါဝင်ကြောင်း၊ နန်းစောင်းပု ကျေးရွာတွင်လည်း နေရဉ္ဇရာ မြစ်ရေကြောင့် ကမ်းပါးပြိုကာ နေအိမ်နှစ်လုံး ရေမျောပြီး ငါးလုံးခန့်မှာ ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း အဆိုပါကျေးရွာ ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ရေကြီးမှုများကြောင့် ကလေးမြို့နယ်အတွင်း ဆည်ကြီးချောင်း တံတား၊ နတ်တံခါးချောင်း တံတား၊ ဆိပ်ကမ်းသာတံတား၊ နန်းကလိန်ချောင်း တံတားတို့မှာ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဆိပ်ကမ်းသာတံတားကို ကမ္ဘောဇဘဏ်က တာဝန်ယူ ပြန်လည် ပြုပြင် တည်ဆောက်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ဆည်ကြီးချောင်းတံတားကို မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီက ပြန်လည် ပြုပြင် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကော်မတီမှထပ်မံ သိရသည်။
လက်ရှိကလေးမြို့တွင် ရေပြန်ကျနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ရေဘေးကယ်ရေး စခန်းများတွင် သွားရောက် နေထိုင်ကြသူများသည် မူလနေထိုင်ရာ နေအိမ်များသို့ ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများ ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ရေဘေးသင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများထံမှ သိရသည်။
အီဂျစ် နိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ် သမ္မတဟောင်း မိုဟာမက် မော်ဆီကို ထောက်ခံကြတဲ့ သူတွေနဲ့ လုံခြုံရေးတွေ ထိတ်တိုက် တွေ့ခဲ့ကြလို့ လူ ၅၀ သေဆုံးခဲ့ရပြီး နောက်တစ်နေ့ညမှာ အရေး ကြီးတဲ့ ပစ်မှတ်တွေကို တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆိုင်းနိုင်း တောင်ပိုင်းက လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ဌာနချုပ်မှာလည်း ကားဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရလို့ လူ ၂ ဦး ထက်မနည်း သေဆုံး ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အဆောက်အအုံ ပြိုကျခဲ့ရပြီး အပျက်အစီးတွေကြားမှာ လူတွေ ရှိနေနိုင်သေး တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆူးအက်ဇ် တူးမြောင်း ဒေသတွင်းက အစ္စမေးလီယား မြို့အနီးမှာ အီဂျစ် စစ်သား ၆ ယောက် သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရအပြီးမှာ အခုလို ကားဗုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
တစ်ခါ ကိုင်ရိုမြို့က ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုလ်တု ဖမ်းယူတဲ့ စလောင်းကိုလည်း ဒုံးလက်နက်နဲ့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သင်တန်းကြေးအခမဲ့ဖြင့် တိုယိုတာ ကားပြုပြင်ရေး နည်းပညာသင်တန်းဖွင့်
မြန်မာနိုင်ငံ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက စေလွှတ်သည့် သင်တန်းသားများ၊ မှော်ဘီ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားငါးဦးနှင့် အခြားသင်တန်းသား၊ စုစုပေါင်း ၁၇ ဦးကို အဆိုပါ သင်တန်းတွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး၏ စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အခြေခံ မော်တော်ယာဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို သင်ကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ သင်တန်းကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက်နှုန်းဖြင့် သုံးလသင်ကြားမည် ဖြစ်ကာ သင်တန်းကြေး အခမဲ့ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မော်ဒယ်လ် မတ်ခ်တူးယာဉ် တစ်စီးကို သင်တန်း အထောက်အကူ ပစ္စည်းအဖြစ် နမူနာထား သင်ကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
TTAS ကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်နိုင်ငံ Toyota Tsusho ကော်ပိုရေးရှင်းက ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မြန်မာကုမ္ပဏီက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပူးပေါင်း တည်ထောင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး တိုယိုတာ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။
နည်းပညာမြင့် မော်တော်ယာဉ် အများအပြား မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းလာပြီးနောက်တွင် မော်တော်ယာဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်းများရှိရန် အထူးလိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယခုဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းသည် မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံ သင်တန်းမျှသာ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလ ပြီးဆုံးပြီးနောက် သင်တန်း၏ ထိရောက်မှုကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးမှသာ ပိုမိုအဆင့်မြင့် သောသင်တန်း ထပ်ဖွင့်သင့်၊ မသင့်ကို စဉ်းစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း TTAS ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာဦးစိုးကြည်၊အသက်(၄၀)နှစ်၊ (ဘ)ဦးလှမောင်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အင်းတကော် ကျေးရွာနေသူနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ မကြည်ကြည်မြင့်၊အသက်(၃၉)နှစ်၊(ဘ)ဦးသန်းမြင့်၊တို့ နေအိမ်မီးဖိုချောင်တွင် နှမ်းဖတ်ချဉ်သုတ်ရန်ကြက်သွန်လှီး နေစဉ်စကားများကြရာ ဒေါသစိတ်မထိမ်းနိုင်ဘဲ မကြည်ကြည်မြင့်မှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးစိုးကြည်အား ကော်ရိုးတပ်အရိုးအသွား (၉)လက်မခန့်ရှိ ကြက်သွန်လှီးဓါးနှင့်ထိုးလိုက်ရာ ဦးစိုးကြည်မှာဝဲဘက်ရင်အုံနှင့် ၀ဲဘက်လက်မောင်းတို့တွင် စူးဝင်ဒဏ်ရာများဖြင့်သဆုံးသွားခဲ့သည်။
အိချောပိုက ခန့်စည်သူနဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေပါတယ်။ ဇာတ် ကားရိုက် ကူးမှုတွေကိုလည်း ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးဖြစ်နေသလိုသီ ချင်းတွေကိုလည်း လုပ်နေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုသီချင်းတွေ စီစဉ်ဖြစ် တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “သီချင်းတွေက ပရိသတ်တွေတောင်းဆိုတာတို့၊ အကူအညီ တောင်း တာတို့ဆို ဆိုဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်း ခုနစ်ပုဒ် လောက်လုပ်ထားတာရှိတယ်။ သီချင်းခွေ လုပ်ဖို့ အတွက်ကတော့ လော လောဆယ်အစီအစဉ် မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်တွေ တောင်း ဆိုရင်တော့ ဆိုဖြစ် သင်္ကြန်မှာ သီချင်းဆိုပေးဖို့ပြောတော့ ဆိုပေးရင်းနဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ အိချောက အမှန်တိုင်းပြောရရင် သီချင်း ဆိုတာဝါသနာပါပေမယ့် သီချင်းသိပ်ဆိုတတ်တဲ့ အထဲမပါဘူး။ ပရိသတ်တွေ ရဲ့အားပါပဲ။ သီချင်းတွေက ဆရာ ဓိရာမို ရေးပေးတာပေါ့ အေးအေးလေးတွေ ပါပဲ။ အနုပညာ သမားဆိုတာ သီချင်း လည်းဆိုတတ် ရမယ် ဆိုတော့ အနည်းအကျဉ်း ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ထားတဲ့ စိတ်ကူးလေးပါပဲ” လို့ ပြောပြပါတယ်။
သီချင်းတွေလုပ် ဖြစ်ပေမယ့် သင်္ကြန်တွင်းလောက်ပဲ နယ်တွေကို သွားဆိုဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေ ကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ ပြောပြတဲ့ အိချောပိုက သီချင်းတွေလုပ် ထားပေမယ့် တချို့နယ်တွေက သီချင်း ဆိုပေးဖို့ ဖိတ်ကြတယ်။ အိချောကလည်း ကားရိုက်တွေလည်း ရှိနေတော့ နယ်တွေထွက်ဆိုဖို့ ဖျက်လိုက်ရတာတွေအတွက် ပရိ သတ်တွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ဆိုရင်တော့ ဆိုဖြစ် ပါတယ်။ အိချောကို ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် ကြိုးစားပြီး လုပ်သွားရပါတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
လိင်တံတ၀ိုက်တွင်သေးငယ်သောပုတီးစေ့လေးများ ထည့်ခြင်းဖြင့် ပန်းသေပန်းညှိုးတာကိုကာကွယ်နိုင်တော့မည်
ပန်းသေပန်းညှိုး ဝေဒနာသည် အမျိုးသားများအတွက် ကုသရေး နည်းလမ်းသစ် တစ်ခုကို သုတေသီများက အတည်ပြု စမ်းသပ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ ဓာတ်ငွေ့ ဖြည့်တင်းထားသည့် အလွန်သေးငယ်သော ပုတီးစေ့လေးများသည် အမျိုးသားများ၏ လိင်မှုဘဝကို စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်အောင် ဖိနှိပ်သည့် အခြေအနေကို တွန်းလှန်ရန် အကောင်းဆုံး အဖြေတစ်ခု ဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသီများက ယင်းနည်းလမ်းသည် ဗီယာဂရာ ဆေးဝါးများထက် ပိုမို၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု ထူးကဲမည်ဟု မျှော်လင့်လျှက် ရှိသည်။ စမ်းသပ်ဆဲ အဆင့်တွင်သာ ရှိနေသေးသည့် ယခုကုထုံးတွင် အလွန်သေးငယ်သော ပုတီးစေ့လေးများကို ဝေဒနာသည် အမျိုးသား၏ သုက်လွှတ်တံအတွင်း ထည့်သွင်းပေးရမည် ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်း သုတေသန ရလဒ်များအရ ယခုနည်းလမ်းသည် ဆေးဝါးများ သုံးစွဲခြင်းထက် သက်ရောက်မှု အားကြီးကြောင်း သုတေသီများက ထောက်ခံထားသည်။ အကျယ် (၁)မီလီမီတာပင် မရှိသည့် အလွန်သေး ငယ်သော ပုတီးစေ့လေးများကို ဝေဒနာရှင် အမျိုးသား၏သုက်လွှတ်တံ အနီးတဝိုက်တွင် ထည့်သွင်းပေးပြီး ယင်းတို့က နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထုတ်လွှတ်ပေးနေမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဓာတ်ငွေ့သည် သွေးကြောများကို ကျယ်ပြန့်စေသည့် အာနိသင်မျိုး ရှိနေပြီး ဝေဒနာသည်၏ မျိုးပွားအင်္ဂါ တစ်ဝိုက်တွင် သွေးရောက်ရှိမှုကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေသည်။ ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းသည် သုက်လွှတ်တံတစ်လျှောက်ရှိ သီးခြား အခန်းငယ်လေး အတွင်းသို့ သွေးဝင်ရောက်နိုင်မှု မရှိတော့၍ဖြစ်ရာ ယခုကုထုံးက ယင်းဖြစ်စဉ်ကို တွန်းလှန်နိုင်မည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ အခန်းငယ်လေးများသည် သဘာဝအလျောက် ရှုပ်ထွေးလွန်းသော သွေးကြောငယ်များဖြင့် ယှက်ဖြာနေပြီး ယင်းတို့၏ အတွင်းပိုင်း သွေးစီးဆင်းမှု အကြောင်းတစ်ခုခုဖြင့် အဟန့်အတား ဖြစ်လာခြင်းက ပန်းသေပန်းညှိုး ပြဿနာကို ပေါ်ပေါက်လာစေသည်။ ယခုပုတီးစေ့လေးများကမူ အဆိုပါ ဧရိယာတွင် သွေးလှည့်ပတ် ဝင်ရောက်မှုကို အားပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ ပန်းသေပန်းညှိုး ဝေဒနာ ကြုံရသည့် အကြောင်းရင်းများ၌ သွေးတိုးခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါရှိခြင်း၊ ကိုလက်စထရော များလွန်းခြင်းတို့လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ယခုနည်းလမ်းသည် ဆီးချိုကြောင့် လိင်သာယာမှု ပျောက်ဆုံးသွားသူများအနက် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းမှ (၇၅)ရာခိုင်နှုန်းထိကို အကူအညီ ပေးနိုင်မည်ဟု ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။
ယခင်က နိုက်ထရစ် အောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့သည် နှလုံးသွေးကြောများကို ကျယ်စေသဖြင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါသည်များအတွက် အသုံးပြုရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ရိုက်စ်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများကမူ ယင်းအခြေခံ အာနိသင်ကို အခြားနည်းလမ်း တစ်ရပ်တွင် ပြောင်းလဲ အသုံးချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များဖြင့် စမ်းသပ်မှု ရလဒ်များအရ (၃)ပတ်မျှ အတောအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း နိုးကြားမြင့်မားလာသည်ကို အတည်ပြု တွေ့ရှိထားပြီး ဖြစ်သည်။ ယခုစမ်းသပ်ချက်များသည် Type2ဆီးချိုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပန်းသေပန်းညှိုး ပြဿနာတွင်သာ အကျုံးဝင်သော်လည်း အခြားအကြောင်းရင်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝေဒနာရှင်များအတွက်ပါ ကုထုံးကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဟု ပညာရှင်များက ယုံကြည်လျှက် ရှိသည်။ ယခုအခါ ရိုက်စ်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများသည် လူသားများနှင့် စမ်းသပ်ရန် စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
အခြားသော သတင်းများအရ သိပ္ပံပညာရှင် အချို့သည် ပန်းသေပန်းညှိုးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးမည့် စက်ဘီးထိုင်ခံ တစ်မျိုးကိုလည်း ဖန်တီးထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ယခင် သုတေသန ရလဒ်များက စက်ဘီးစီးရာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ကပ်ပယ်အိတ်ကို ထောက်ပံ့သည့် ပေါင်ခြံသွေးကြောများကို ပြင်းထန်စွာ ဖိနှိပ်ထားမှု ဖြစ်ပေါ်နေစေကြောင်း အတည်ပြု ဖော်ထုတ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသား စက်ဘီးသမား တစ်ဦးသည် စက်ဘီးစီးနေချိန်တွင် သုက်လွှတ်တံသို့ သွေးပို့လွှတ်မှု (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းမျှ လျော့ကျနေမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းအခြေအနေ ကာလရှည်ကြာ သက်ရောက်နေပါက ပန်းသေပန်းညှိုး ပြဿနာ ကြုံနိုင်ခြေ မြင့်တက်လာမည်ဟု ဆိုသည်။ ပညာရှင်များက (၃)နာရီအထက် စက်ဘီးစီးမှုများသည် ရေရှည်တွင် အမျိုးသားများ၏ လိင်မှုဘဝကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
စပိန်နိုင်ငံ အလီဆန်တီ တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များကမူ ယင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးမည့် စက်ဘီးထိုင်ခုံ တစ်ခုကို တီထွင်ဖန်တီးနေကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အောက်ခြေတွင် ပတ္တာကဲ့သို့ နေရာရွှေ့ပြောင်းနိုင် သည့် ဒီဇိုင်းသစ် ထိုင်ခုံသည် ခန္ဓာကိုယ် တည်ရှိပုံ ထောင့်ချိုး အပြောင်းအလဲမျိုး ဖြစ်လာစေပြီး စက်ဘီးစီးနေစဉ် ပေါင်ခြံသွေးကြောများကို ဖိနှိပ်ထားခြင်းအား ရှောင်လွှဲနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယင်းပစ္စည်း သည်လည်း စမ်းသပ်ဆဲ အဆင့်တွင်သာ ရှိနေပြီး ပန်းသေပန်းညှိုး ဝေဒနာကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရာတွင် မည်သည့် ပမာဏထိ ထိရောက်အောင်မြင်မည်ကို သုတေသန ပြုနေဆဲဟု သိရှိရသည်။
အကျင့်စရိုက်မကောင်းရင် ၀င်ဆန့်ဖို့ခက်ပြီဆိုတဲ့ ယွန်းယွန်း
Q. ယွန်းယွန်းကို အကျင့်စရိုက်ကောင်းဖို့ ဖေဖေနဲ့ မေမေက ဘယ်လိုသွန်သင်ဆုံးမထားလဲ။
A. သမီးကို ဖေဖေနဲ့မေမေက ဘာသာရေးသင်တန်းတွေ တက်ခိုင်းတယ်။ သမီးရဲ့မိဘနှစ်ဦးစလုံးကလည်း ဘာသာရေးဘက်မှာ အားသန်ကြ တယ်လေ။ ပြီးတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဖေဖေနဲ့မေမေက သမီးကို စိတ်ကောက်ခွင့်မပေးဘူး။ စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူးတဲ့။
Q. ယွန်းယွန်းက ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းတွေလည်း တက်ဖူးတော့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဲဒီမှာ ဘာတွေသင်ပေးလဲ။
A. သင်ပေးသမျှတွေအားလုံးကတော့ စိတ်ကောင်းထားမှုကိုပဲ ဦးတည်နေတယ်လို့ နားလည်ထားပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းပြီဆိုရင် အကျင့်စရိုက်ကောင်းပြီပဲလေ။
A. မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ ဘယ်လိုအဖြစ်တွေနဲ့ ကြုံရမယ်လို့ ယွန်းယွန်းထင်ပါသလဲ။
A. ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၀င်ဆံ့ဖို့ခက်သွားလိမ့်မယ်၊ နိမ့်ကျသိမ်ငယ်တဲ့သူ ဖြစ်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
By Eternal Light Magazine
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်ပြိုင်ပွဲ ကြီး Miss International 2012 က နေ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ ဟာ ကမ္ဘာ့ အလယ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သော အောင် မြင်မှု တစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင် ကာ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင် ငံကို ပြန် လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲကြီးကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် အောင်မြင်မှုကို သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာက အခု အချိန်မှာဆိုရင် အနုပညာ အလုပ်တွေလည်း လုပ်လာသလို ပရဟိတအလုပ်တွေလည်း ဆက်တိုက်လုပ်လာတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲဝင် မပြိုင် ခင်က တည်းက ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ချင်စိတ်ရှိခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာကပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ပြီး တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပရဟိတအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း လည်း ပြော ပါတယ်။
” Miss Myanmar Crown ရတဲ့အချိန်မှာ ညီမတို့ပရဟိတလုပ်မယ်ဆိုပြီး စုလိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်တုန်းက မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။ နောက်ပိုင်းမှ ညီမဂျပန်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာ ပရဟိတနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သင်လာရတယ်။ Miss တစ်ယောက်က ဒီလို ပရဟိတ လုပ်မယ့် စိတ်တွေလည်းရှိဖို့ သင်လာရ တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ညီမပရဟိတတွေ ဆက်တိုက်လုပ်လာရတယ်။ နိုင်ငံတကာ ရဲ့ စံပြတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပရဟိတတွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ညီမလုပ်နေတဲ့ ပရဟိတက တခြားနိုင်ငံက လုပ်နေတဲ့ပရဟိတလောက် မပြောပလောက်ပါဘူး။ ညီမအနေနဲ့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်အားတဲ့အချိန်မှာ လုပ်နေပါတယ်။
“ညီမတို့ Miss အနေနဲ့ ရုပ်လှတာထက် စိတ်လှပြီး အားလုံးပြည့်စုံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Model တစ်ယောက်နဲ့ Model ဆိုတာ ကွာပါတယ်။ မယ်တွေကလည်း ဟိုဘက် နိုင် ငံတွေမှာဆိုရင်မယ်ရပြီးတာနဲ့ ပရဟိတတွေ လုပ်လာကြတယ်။ လူသားတွေကို စာနာမှု၊ ထောက်ထားမှုတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စံပြတစ်ယောက် အဖြစ် နေရပါ တယ်” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတတ်နိုင်သလောက် ပရဟိတတွေ ဘက်တိုက်လုပ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာက ဆောင်ရွက် ခဲ့တဲ့ ပရဟိ တတွေ အကုန်လုံးက သူ့အတွက် အမှတ် တရရှိစေတဲ့အပြင် ဦးကျော်သူ ဦးဆောင်တဲ့ နာရေး ကူညီမှုအသင်းမှာလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပရဟိတ အလုပ်က တော့ ပိုပြီးအ မှတ်တ ရရှိပြီးဝမ်းသာခဲ့ရကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောပြတယ်။ ” ညီမဘဝတစ်သက်တာ အမှတ်တရကတော့ ဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ ညီမသွားလုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ညီမကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အလုပ်ပေးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ညီမတအားဝမ်းသာပါတယ်။ လူဆိုတာ မွေးတဲ့ တစ်နေ့၊ သေတဲ့တစ်နေ့လေ။သေကြတဲ့ အချိန် မှာ လူတွေက ပူဆွေးသောက ဖြစ်နေကြတယ်။ အဲလို ပူဆွေးသော က ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ထက်ဝက်လျော့သွားအောင်ညီမတို့လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ တဲ့ ပီတိက ဘယ်အရာနဲ့မှ လဲလို့မရပါဘူး” လို့ ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ ၂၂ရက်နေ့မှာ အရိုးကင် ဆာဝေဒနာနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဒေးဒရဲ မြို့နယ်၊ ကျံဒတ်ကျေးရွာ အုပ်စုမှာအသက် ၉ နှစ် အရွယ်ရှိ ကလေးငယ်မောင် နန်းထိုက်အောင်ရဲ့ နာရေးအလှူကို လည်းနန်းခင်ဇေယျာ သွား ရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ ပါတယ်။ မောင်နန်း ထိုက်အောင်ရဲ့ နာရေးမှာ ကူညီ ပေးဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး နန်းခင်ဇေယျာက” ဒီကလေးက ညီမတာဝန် ယူထားတဲ့ကလေးလေးပါ။ ညီမ တာဝန်ယူထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလမ်း ခရီးမှာဖြောင့်ဖြောင့်သွားစေချင်တယ်။ ဒီကလေးက ညီမကို တအားကြီး တွယ်တာတဲ့ ကလေးပါ။ သူညီမအိမ်မှာကစားမယ်ပြော တုန်းက ညီမသူ့ဆန္ဒမဖြည့် ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ ဘူး။ သူအခုလိုရုတ်တရက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီဘက်မှာလည်း ညီမအလုပ်တွေအများကြီး ရှိတဲ့အထဲမှာ အားလုံးဖျက် ပြီး သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို ညီမလိုက်ပို့ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ညီမရှာ ထားတဲ့ငွေနဲ့ သူတို့ ကိုထောက်ပံ့ ပေးတယ်” ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်ကို Title ၈ ခုနဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာက နောက်ထပ်လည်း ပရဟိတတွေ လုပ်သွားဖို့ရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ ” ပထမဦးဆုံး သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ၊ HIV, AIDS ပြီးတော့ကလေးလေးတွေရဲ့ ပညာရေး၊သထုံနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း ပညာရေးနဲ့ပတ် သက်ပြီးဆွေး နွေး ပွဲ တွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Title ၈မျိုး နဲ့ညီမလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ညီမ အနေနဲ့ပရဟိတ တွေကို အားရင် အားသလိုလုပ်ဖြစ်သွားမှာပါ” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဖဲရိုက်ရင် လိုက်ရဲတာမှ သတ္တိမဟုတ်ဘူး ပြေးရဲတာလည်း သတ္တိဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
ကျနော် ခြောက်တန်းနှစ်ရောက်တော့ အဖေက တစ်ချပ်မှောက်ကစားနည်းသင်ပေးတယ်။
ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်တည်း နွေရာသီတစ်ခုလုံး ကစားကြတာပေါ့။
ဘဝတလျှောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်အခါတွေမှာ ဖဲဝိုင်းတစ်ခုလို ကျနော်ခန့် ခွဲတယ်။
ဖဲဝိုင်းတစ်ခုမှာ ကျန်ဖဲက probability ဖြစ်ပြီးတော့ ကြားဖဲက opportunity ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လောက် Invest လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို monopolize လုပ်မလဲဆိုတာတွေရယ် အဟိန်းအဟောက် အခြိမ်းအခြောက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
အောက်ဖဲက ကိုယ်ပိုင် Secret တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်လည်းဖြစ်နိုင်သလို အားနည်းချက် လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ဖဲသမားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ စိတ်ရှည်ဖို့ သည်းခံဖို့ သက်လုံကောင်းဖို့ observationကောင်းဖို့ အထူအပါးနားလည်ဖို့ စသဖြင့် အရည်အချင်းကောင်းတွေအများကြီးလိုပါတယ်။
အရေးကြီးတာတစ်ခုက ဖဲရိုက်တဲ့အခါ လိုက်ရဲတာမှသတ္တိမဟုတ်ဘူး။
By Sai Sai Kham Leng
တချိန်ချိန်မှာ သံပုရာသီးလေး ရှောက်သီးလေးတွေဟာ HIV ကာကွယ်ရေးအတွက် အင်အားတစ်ခုအနေနဲ့
ဖြစ်လာမလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါပြီ။
စမ်းသပ် တွေ့ရှိချက်တွေအရ သံပုရာရည် (သံပုရာသီးကို ညှစ်လို့ရလာတဲ့ အရည်) ဟာ ရောဂါပိုးနဲ့ အခြားလိင်ပိုင်းဆိုက်ရာ ကူးစက်ရောဂါပိုးတွေကို နှိမ်နင်းရာမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာေ တွ့ခဲ့ရတယ်။
သံပုရာရည်တွေကို မြေထဲပင်လယ်ဒေသနဲ့ အရှေ့တောင် အာရှက ကျေးလက်ဒေသ တွေမှာ ပဋိသန္ဓေ တားဆေး အဖြစ်ေ ရှးနှစ်ပေါင်းရာကျောက်ကတည်းက အစဉ်အဆက် သုံးစွဲလာခဲ့ တယ်လို့ သိရတယ်။ နိုင်ဂျီးရီးယားမှာဆိုရင်လည်း လိင်လုပ်သားတွေဟာ ရှောက်၊ သံပုရာရည် တွေကို အသုံးပြုလာကြတာ နှစ်ပေါင်း ကြာရှည်ရှိခဲ့ပြီလို့ထိုင်းနိုင်ငံက လွတ်တော်အမှတ်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး သားဆက်ခြားရေးကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ မီချိုင်းက
တစ်ယောက်ယောက်ကများ အကာအကွယ်မယူပဲ ကိုယ်လက် နှီးနှောမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ
ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ပိုးရှိနေနိုင်တဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သံပုရာရည် ဒါမှမဟုတ် ရှောက်ရည်နဲ့ သာဆေးလိုက်ဒါဟာ ဒီအတိုင်းဘာမှ မလုပ်ပဲ ထားတာနဲ့စာရင် တော်သေးတယ်လို့ မီချိုင်းက ပြောပါတယ်။
ရှောက်တို့ကို သုံးတဲ့အခါ အားသာချက်ကတော့ ဈေးချိုပြီး ပေါပေါများများ တွေ့နိုင်လို့ပါပဲလို့ သူက ဖြည့်စွက်ပြောပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သုံးရတာ ရိုးရှင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ်လက် မနှီးနှောခင်မှာ ဂွမ်းစကို လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းစာ သံပုရာရည်ထဲမှာ စိမ်လိုက်ပြီး အမျိုးသမီး အင်္ဂါထဲကို ထည့်ထားရမယ်။ ပွန်းပဲရှနာ ထိခိုက်ထားတာမျိုး မရှိဘူးဆိုရင် ကျိန်းစပ်နာကျင်တာတွေ ခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှောက်ရည်
သံပုရာရည်က ကွန်ဒုံးကို ထိခိုက်မှာလည် မဟုတ်ဘူးလို့ မီချိုင်းရဲ့ ပြောစကားအရ သိရတယ်။
တည်ထောင်ထားတဲ့ ထိုင်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး NGO တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လူဦးရေနဲ့ လူမှုဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အသင်း Population and Community Development Association PDA ကမဲလ်ဘုန်း တက္ကသိုလ်နဲ့ ထိုင်းပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဌာနတို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးရှောက်နဲ့ သံပုရာရည်တို့ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာ စမ်းသပ်နေကြတယ်။ အစောပိုင်းဓါတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်ချက်မှာ သုတ်ပိုး ဟာ သံပုရာရည်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါ မလှုပ်မရှားဖြစ်သွားပြီးစက္ကန့် ၃၀ အတွင်း သေသွားတယ်လို့ မီချိုင်းက ပြောကြားသွားပါတယ်။
စမ်းသပ် လေ့လာမှုတွေကို သည့်ထက်မက ပိုပြီးလုပ်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ မီချိုင်းက သတိပေးပြောကြား သွားပါတယ်။
ရှောက်ရည်ဟာ တကယ်ပဲ အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာကို သက်သေ သာဓက ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ မပြနိုင်သေး သရွေ့အမျိုးသမီးတွေကို ဒီနည်းလမ်း အသုံးပြုကြပါလို့ မပြောနိုင် သေးပါဘူး။ လို့ မီချိုင်းကြ ဖည့်စွက်ပြောပါတယ်။
ကာလ အတောအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာ နေရာ သုံးနေရာခွဲပြီး သံပုရာနဲ့ ရှောက်ရည်တွေဟာ ပဋိသန္ဓေတားဆီးရေးနဲ့ HIV ကာကွယ်ရေးတွေမှာ တကယ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာကို စမ်းသပ်လေ့လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရတယ်။
ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ HIV ကာကွယ်ရေးအတွက် အားတက်စရာပါ။
By အေးမြချမ်း၏ “ကမ္ဘာကြီးကို ဆေးကုပေးပါ”
ရန်ကုန်မြို့ လမ်းဘေးဆိုင်တွေ၊ အချို့ကွမ်းယာဆိုင်တွေမှာ အမျိုးသားလိင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အားတိုးဆေးတွေ၊ လိင်စိတ်ကြာရှည်ခံစေတဲ့ဆေးတွေကိုရောင်း နေကြတာဟာ ဥပဒေနဲ့ ညီပါသလား။ ဘယ်လို ခွင့်ပြုထားပါသလဲ။ ပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါသလား။
ကိုနိုင်နိုင်မေးတဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်တွေက အမျိုးသားလိင်ဆိုင်ရာဆေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာ အေးကိုကိုထံ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာအေးကိုကို ပြောထားတာကတော့ ”အဲဒီဆေးတွေက ဥပဒေနဲ့ မညီဘူး။ အဲဒီဆေးတွေက များသောအားဖြင့် FDA ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အများစုက မှောင်ခိုကနေ ခိုးဝင်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ များတယ်။ FDA က တရားဝင် ခွင့်ပြု ပေး ထားတာကလည်း မရှိသလောက်ပဲ။ မြို့နယ်အစားအသောက် နဲ့ ဆေးဝါးကြီးကြပ် မှုကော်မတီဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒါကနေ သူတို့ကို အရေးယူလို့ ရ တယ်။ အဲဒါတွေကို ခွင့်ပြုထားတာမျိုး မရှိဘူး။အထူး သဖြင့်တော့ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူတွေ၊ သွေးတိုးရောဂါတို့၊ ဆီးချိုရောဂါ တို့ ရှိတဲ့ လူတွေလည်း မသောက်သုံး သင့်ဘူး။ သောက်ရင် အသက်အန္တရာယ်အထိ ရှိနိုင်တယ်။ သာမန်လူတွေလည်း မသောက်သုံးသင့်ဘူး။ အန္တရာယ်ရှိတယ်”
ရဲဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးဖို့လိုတဲ့အခါမှာ အရပ်ဝတ်နဲ့ဖမ်းလို့ရလား။ ဖမ်းဝရမ်း ပြဖို့ရောလိုလား။ ရဲဖြစ်ကြောင်း စိစစ်ရေးကတ်ေ ရာ ပြဖို့လို ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ကိုမောင်လင်းရဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပေါ်ပြူလာနယူးစ်က မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဒီအချက် ၃ ချက်ကို ဖြစ် စဉ် အပေါ် မူတည်ပြီး ဖြေကြားသွားရမယ်လို့ အရင်ဆိုပါတယ်။ ပထမအချက်အနေနဲ့ ရဲကို တရားခံကသိရင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်တဲ့ အတွက် အရပ်ဝတ်နဲ့ ဖမ်းလို့ရ တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒုတိယအချက် ဖမ်းဝရမ်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲ့ ပြစ်မှုနဲ့သာ သက် ဆိုင်ပြီး ပြစ်မှုအပေါ်လိုက်ကာ ရဲက ဖမ်းဝရမ်းကို ပြသရမှု ၊ မပြသရမှု အကြောင်းရှိ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရဲအရေးပိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ရဲကဖမ်းဝရမ်းမပြဘဲ ဖမ်းဆီးနိုင်ပြီးတော့ ရဲ အရေးမပိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာတော့ ရဲက ဖမ်းဝရမ်းပြသပြီးမှသာ ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ဥပမာ- မယားခိုးမှု၊ ဒီမယားခိုးမှု ကို ထောင်ဒဏ်အထိချမှတ်နိုင်ပေမယ့် ဒီ အမှုဟာ ရဲအရေးမပိုင်တဲ့အတွက် ဖမ်းဝရမ်းလို တယ်လို သိရပါ တယ်။ နောက်ဆုံးအချက် ရဲစစ်ဆေးရေးကတ်ပြသဖို့ လိုမလို ဆိုတာကတော့ တောင်းခံတယ်ဆိုရင် ပြသဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသိသက်သေပါလာရင်တော့ လိုအပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။
မီတာတပ်ထားပြီး တစ်ယူနစ်မှ မသုံးစွဲရင် ဒဏ်ငွေရိုက်၊ မီတာဖြုတ်သိမ်း တာမျိုးလုပ်တယ်လို့ ကြားမိပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ ဘာကြောင့် အရေးယူရတာပါလဲ။
ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း ခင်ဗျာ။ မီတာသုံးစွဲခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်သံတွေ အတော်ရှိနေခဲ့ပြီး မီတာမသုံးရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြောင့်ကြ မှုဟာ အလွန်ကို နည်းခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်မှုက နည်းခဲ့လို့ သိပ်မသိခဲ့ ကြပါဘူး။ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းမေးတဲ့မေးခွန်းဟာ စာဖတ်သူအားလုံးလည်း အကျိုး ရှိစေတဲ့အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင် ခိုင်ကို မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ…
”မီတာ တစ်ယူနစ်မသုံးဘဲ သုံးလအထိ ရပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ မီတာဖြုတ်သိမ်းပါတယ်။ ဒဏ်ငွေတော့ မရိုက်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ မီတာမသုံးဘဲထားရင် တပ်ထားတာ အပိုကြီးဖြစ်နေမယ်။ သူခိုးခိုးမယ်။ အဓိကတော့ မသုံးတဲ့အတွက် ဖြုတ်သိမ်းတာပါ။ မီတာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခပေးလည်း မရပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
မေးခွန်းများမေးလိုပါက popularnews@popularmyanmar.com (သို့မဟုတ်) ဂျာနယ်တိုက် လိပ်စာအတိုင်း စာတိုက်မှ တစ်ဆင့် မိမိ မေးလိုသည့် မေးခွန်းနှင့်အတူ အမည်၊ နေရပ်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ထည့်သွင်း၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Voice ။ ။ မမေခလာနဲ့ အစ်မနဲ့ နှစ်ယောက်တွဲ ဖျော်ဖြေပွဲလေးလုပ်ဖို့ စိတ်ကူး ဖြစ်ပုံလေး ပြောပြပေးပါဦး။
MS ။ ။ အမှန်တကယ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလလောက်တုန်းက အစ်မမြန်မာပြည်ကို တစ်ခေါက် ပြန်လာတုန်းက ဒီပွဲလေး လုပ်ဖို့ မငယ် (မေခလာ) က အစ်မကို ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစ်မက အဲဒီအချိန်တုန်းက ညီထွဋ်ရယ်၊ ဟေမာရယ်၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုတို့နဲ့ ‘မောင် . . ယုံလား . . နှစ်ယောက်မရှိဘူး’ ဆိုတဲ့ပွဲမှာ ဆိုရမှာရယ်၊ အမေရိကကို ပြန်ဖို့ ကိစ္စတွေ အတွက်ရယ် အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ ပြန်ဖို့ရှိတယ် ဆိုတာကလည်း အစ်မရဲ့ အစ်မနှစ်ယောက်နဲ့ တူတော်မောင်နဲ့က ဗီဇာရတာနဲ့ သူတို့ကိုလည်း အစ်မက အလည်ခေါ်ချင်တာနဲ့ ဟိုကိုပြန်ကို ပြန်ရမှာပေါ့နော်။ နောက်သုံးလလောက် နေလို့ မဆွေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာတဲ့ အခါကျရင် လုပ်ချင်လုပ် ပေါ့လို့ပြောတော့ သူက သီတင်းကျွတ်လောက်မှာ လုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောတော့ မဆွေလည်း သဘောတူခဲ့တာ။
Voice ။ ။ ဂီတလောကမှာ မေဆွိနဲ့ မေခလာက မတည့်ကြဘူးလို့ ကောလာဟလ ထွက်ခဲ့ဖူးတယ်နော်။ မဆွေတို့ နှစ်ယောက်တွဲ ဖျော်ဖြေပွဲဆိုပြီး မရှိခဲ့တာက ပွဲစီစဉ်သူတွေက မလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့လား။ တခြားဘာ အကြောင်းတွေ ရှိဦးမလဲ။
MS ။ ။ အမှန်တကယ်ကတော့ အားလုံးက မေ့သွားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မြန်မာ ပြည်ဦးသိန်းတန်က Play Boy အဖွဲ့ကနေ ထွက်လာပြီး LPJ ဆိုပြီး တီးဝိုင်းထောင်တဲ့ အချိန်မှာ အစ်မရော၊ မငယ်ရော၊ ကိုင်ဇာရော၊ တူးတူးတို့ရော၊ ကိုခိုင်ထူးတို့ရော အဲဒီတီးဝိုင်းမှာ ပင်တိုင်အနေနဲ့ ဆိုကြတယ်။ အစ်မတို့ အဲဒီတုန်းကဆို ပြည်ထောင်စု အလံကြီး သယ်သွားတဲ့ မြို့တွေမှာ အမြဲတမ်း ညဘက် စတိတ်ရှိုး ရှိတယ်။ အဲဒီပွဲတွေမှာဆိုရင် မငယ်နဲ့အစ်မတို့ အမြဲတမ်း ဆိုဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်း ကျတော့မှ ကိုင်ဇာနဲ့မငယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကောလာဟလ လေးတွေ ထွက်လာတာပေါ့နော်။ အစ်မအနေနဲ့ ကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
Voice ။ ။ အခု နှစ်ယောက်တွဲ ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ကျတော့ အစ်မရဲ့ သီချင်းတွေထဲက ဘယ်သီချင်းတွေ ဆိုဖို့ စဉ်းစားထားလဲ။
MS ။ ။ အစ်မကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ‘မောင် . . ယုံလား . . နှစ်ယောက်မရှိဘူး’ ပွဲတုန်းက ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့ မတူအောင် နည်းနည်းစဉ်းစားပြီး ဆိုမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ နောက်ပြီး Plus3တီးဝိုင်းနဲ့လည်း နည်းနည်းညှိပြီး မတူတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ရွေးဆိုမှာပေါ့။ မငယ်နဲ့လည်း တစ်ယောက်သီချင်း တစ်ယောက် အတူတွဲပြီး ဆိုကြဦးမယ်။ သူအရင်တုန်းက ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုရင်တော့ အစ်မအတွက် အဆင်ပြေတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ထွက်ထားတဲ့ စီးရီး တွေထဲက သီချင်းတွေ သူဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ မဆွေက စာသားရအောင် ကျက်ရမှာပေါ့။
Voice ။ ။ အစ်မက အောင်မြင်တဲ့ မြန်မာသံ သီချင်းတွေ အများကြီးလည်း ဆိုခဲ့ဖူးတာ ဆိုတော့ ဒီပွဲမှာရော မြန်မာသံ သီချင်းတွေထဲက ဘယ်သီချင်းတွေဆိုဖို့ စိတ်ကူးထားလဲ။
MS ။ ။ မြန်မာသံ သီချင်းတွေကတော့ မငယ်နဲ့ နှစ်ယောက် တိုင်ပင်ပြီးဆိုဖို့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ- မငယ်က သူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တသိမ့်သိမ့်သူလို သီချင်းမျိုးကို တို့နဲ့တွဲပြီး ဆိုမယ် ဆိုရင်တော့ တို့က ဆိုပေးရမှာပေါ့။ အဓိကကတော့ လာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်အတွက် အစ်မတို့ ပုံစံလေးတွေ မတူအောင် လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ မငယ်ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှု အပိုင်းမှာက ကလေးတွေနဲ့ Performance လေးတွေ ထည့်ဦးမယ်ဆိုတော့ ဆန်းဆန်းပြားပြား လေးတော့ ဖြစ်မှာပါ။
Voice ။ ။ အစ်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖက်ရှင်ပိုင်း အတွက်ရော ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ။
MS ။ ။ အစ်မ သိသလောက်တော့ မငယ်က အစ်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖက်ရှင်ပိုင်းအတွက် ဒီဇိုင်နာ မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက် ဆီမှာ စပွန်ဆာ တောင်းထားတယ်လို့ ပြောတယ်။ ပေါက်ပေါက် ဆိုရင်တော့ စိတ်ချရတာပေါ့လေ။ အစ်မတို့ကသာ နှစ်ယောက် Match ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေး ဝတ်ချင်တယ် ဆိုတာ သူ့ကိုပြောပြရမှာပေါ့။
Voice ။ ။ အမေရိကမှာ နေထိုင်စဉ်တုန်းက ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ။
MS ။ ။ အစ်မက အမေရိကမှာရှိတဲ့ မြန်မာ ပရိသတ်တွေနဲ့တော့ မဝေးဘူးပေါ့နော်။ အမြဲတမ်းလိုလို မင်္ဂလာဆောင်တို့၊ သင်္ကြန်ပွဲတို့၊ အလှူပွဲတို့၊ စတိတ်ရှိုးမှာ အစ်မ သွားဆိုဖြစ်တယ်။ သီချင်းကတော့ အမြဲတမ်း ဆိုဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကမှာတင် မဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလန်တို့၊ သြစတြေးလျတို့၊ ဂျပန်တို့မှာ လုပ်တဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေလည်း အစ်မ သွားဆိုဖြစ်တယ်။
Voice ။ ။ အစ်မက အမေရိကမှာကျတော့ ဆရာမလုပ်တယ်။ ဒီမှာတုန်းက ကိုယ်က နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင် တစ်ယောက်လေ။ ဒီလိုမတူတဲ့ ဘဝနှစ်ခုမှာ ဖြတ်သန်းရတဲ့အခါ အစ်မစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
MS ။ ။ အစ်မအတွက် အဲဒါက ဘာမှပြဿနာ မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့ အလုပ်အတူ တွဲလုပ်တဲ့သူတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ်မက နာမည်ကြီးတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ဆိုတာ သူတို့သိချင်မှ သိမှာလေ။ သာမန်လူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အစ်မက ဒီအလုပ်ကို လုပ်တာဆိုတော့ ကိုယ်က နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် တစ်ယောက်ပါလို့ ပြောစရာလည်း မလိုဘူးလို့ ထင်တယ်။
ဆရာမအလုပ်ကို လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆရာမတွေအားလုံးနဲ့ အစ်မ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုလည်း တာဝန် ကျေအောင် လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ဘာမှတော့ အနှောင့်အယှက် မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းခင်တဲ့ ဆရာမ နှစ်ယောက်ကတော့ အစ်မက မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီး အဆိုတော်ဆိုတာ သိကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာ။ မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းကဆို အိမ်မှာခိုင်းတဲ့သူ ရှိတယ်။ တစ်နေရာရာ သွားမယ်ဆိုလည်း ဒရိုင်ဘာက ကားမောင်း ပို့ပေးတယ်။ အမေရိကမှာတော့ အဲဒီလိုတွေ မရှိဘူးပေါ့။ အဲဒီတော့ အစ်မက ပင်ပန်းတဲ့ အခါတွေမှာလည်း ညည်းမိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် ဘယ်သူက ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာပေါ့။ တစ်နေရာရာ သွားရင်လည်း ကိုယ်တိုင်ကား မောင်းစရာ မလိုဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါ သူတို့က နင်အဲ့ဒီလို နေတာလားဆိုပြီး အံ့သြတကြီးနဲ့ မေးကြတယ်။ အဲ့ဒီအခါ အစ်မက ဟုတ်တယ်။ အစ်မ အမေဆိုရင် အကယ်ဒမီ ဘယ်နှဆု ရထားတဲ့ မင်းသမီးပေါ့နော်။ သူတို့နိုင်ငံက အယ်လီဇဘတ် တေလာတို့၊ ဘာတို့နဲ့ Compare လုပ်ပြတယ်။ အစ်မအကြောင်းကို အဲ့ဒီဆရာမ နှစ်ယောက်တော့ သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က အစ်မတို့နိုင်ငံက လူတွေလို မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စဆို ဘာမှပြောလေ့ ထုံးစံမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ အစ်မအကြောင်းကို မသိကြ ဘူး။
Voice ။ ။ ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကိုရော အစ်မသဘောကျလား။
MS ။ ။ အစ်မ သဘောကျတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလေးတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ အစ်မကြိုက်တယ်။ အခုဒီမှာဆိုလည်း အဲဒီကျောင်းတွေ ဖွင့်နေကြပြီလေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီက ကလေးကျောင်းတွေက အစ်မ ဟိုမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းတွေလောက်တော့ မဖြစ်သေးဘူး။ လိုအပ်ချက် ကလေးတွေ အစ်မမြင်နေတယ်။ တဖြည်းဖြည်းတော့ ဖြစ်လာမှာပေါ့လေ။ တကယ်တော့ ကလေး တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တယ် ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာသာ မိဘတွေက ကိုယ့်ကလေးကိုယ် Take Care လုပ်ကြတာ။ ဟိုမှာက မိဘတွေက ကလေးမွေးပြီး သုံးလလောက်နေလို့ ကိုယ့်အလုပ်တွေ ကိုယ်သွားကြတဲ့အခါ အိမ်မှာ ကြည့်ပေးမယ့်သူ မရှိဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ကလေးတွေကို Day Care ပို့ကြတာမျိုးတို့၊ ကျောင်းတွေ ပို့ကြတာမျိုး ဆိုတော့ ဆရာမတွေနဲ့ ကလေးတွေကပိုပြီး Close ဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေမှာ Tension ရတာတို့၊ ကလေးတွေက ဆရာမတွေကို ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာက ဆရာမတွေအပေါ် အများကြီး မူတည်တယ်။ သူတို့ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းကို လျှောက်နိုင်ဖို့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရတဲ့ အတွက် တို့ကတော့ ဆရာမဘဝကို ကြိုက်တယ်။
Voice ။ ။ အစ်မက အမေရိကမှာ ဆရာမအဖြစ် တော်တော်ကြာကြာ လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ သူတို့ဆီက သင်ကြားမှုပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီက သင်ကြားမှုပုံစံမှာ ကွာဟနေတဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးပါဦး။
MS ။ ။ သင်ကြားမှု အပိုင်းကတော့ သိပ်ကွာမယ် မထင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေရဲ့ လုံခြုံမှု အပိုင်းကတော့ ကွာမယ်ထင်တယ်။ အစ်မတို့ ဟိုကကျောင်းတွေက Private School တွေဆိုပေမယ့် Clinic ရှိတယ်။ Registered Nurse တွေရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် ကလေးတွေ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကုသ ပေးနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး အစ်မတို့ဆရာမ တွေကလည်း ကလေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတာ Training ယူထားရတယ်။ ဒီမှာတော့ အဲ့ဒီအပိုင်းတွေ နည်းနည်း လိုသေးတယ် ထင်တယ်။
Voice ။ ။ အစ်မ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းနဲ့ ဆရာမလုပ်သက် ဘယ်လောက်မှာ အနားယူခဲ့တယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး။
MS ။ ။ အစ်မနေတဲ့ Delaware မှာ ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Middle School တစ်ခုမှာ အစ်မ ဆရာမ လုပ်ခဲ့တယ်။ အစ်မကတော့ Pre School လောက်အထိပဲ သင်တယ်။ အဲ့ဒီကျောင်းမှာ အစ်မ ဆရာမအဖြစ် ငါးနှစ်လောက် လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခေါက် မြန်မာပြည်ကနေ ပြန်သွားတဲ့ အချိန်မှာ အစ်မ အလုပ်ထွက်လိုက်တယ်။
Voice ။ ။ အစ်မရဲ့ရှေ့ဆက်မယ့် ဘဝကိုရော ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဆက်သွားဖို့ စဉ်းစားထားလဲ။
MS ။ ။ အခုကတော့ အစ်မမြန်မာပြည်ကို အပြီးနီးပါး ပြန်လာတဲ့ သဘောမျိုး ဆိုတော့ အစ်မဝါသနာပါတဲ့ သီချင်းဆိုတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး ပရိသတ်နဲ့ အမြဲထိတွေ့နေအောင် ပြန်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ နောက်ပြီး ဒီမှာ အနေကြာတဲ့အခါ စီးရီး ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လို သီချင်းမျိုးလေး တွေလုပ်မလဲ၊ ဘယ်လို Idea နဲ့ လုပ်မလဲဆိုတာ အစ်မစဉ်းစားဖြစ်တယ်။ ငွေရေး ကြေးရေးနဲ့ အမြတ်အစွန်း အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ပရိသတ်တွေနဲ့ ပြန်ပြီးထိတွေ့ ဆက်ဆံချင်တဲ့ သဘောပါ။ နောက်ပြီး အစ်မက မြန်မာသံကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ကိုဓီရာမိုရ်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သူ့ရဲ့ Music Arrangement တွေနဲ့ မြန်မာသံ သီချင်းခွေတစ်ခွေ လုပ်ဖို့လည်း စိတ်ကူးထားတယ်။
Voice ။ ။ ဂီတလောက နောက်ပိုင်း ပေါ်လာတဲ့ တေးသံရှင်တွေထဲက ဘယ်သူတွေကို အစ်မ သဘောကျလဲ။
MS ။ ။ အစ်မ အခုနောက်ပိုင်း နားထောင် ဖြစ်တာက ချမ်းချမ်းတို့၊ နေနေတို့၊ နီနီခင်ဇော်တို့ နားထောင်ဖြစ်တယ်။ အယ်လ်ဆိုင်းဇီတို့၊ လေးလေးဝါးတို့၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့လည်း အစ်မ နားထောင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကတော့ တစ်ခေတ်ပေါ့လေ။ အစ်မက ဒီအနုပညာ လောကထဲမှာ အမြဲတမ်း ကျင်လည်နေမှာမို့လို့ သီချင်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ် သွားအောင်တော့ ဘယ်လိုသီချင်းမျိုးတွေ ဆိုနေကြလဲ ဆိုတာသိအောင် အမြဲတမ်း နားထောင် ဖြစ်ပါတယ်။
Voice ။ ။ ပရိသတ်တွေအတွက် သီချင်းတွေအပြင် ဇာတ်ကားတွေ ပြန်ရိုက်ဖို့ရော အစီအစဉ်ရှိလား။
MS ။ ။ ဇာတ်ကား ပြန်ရိုက်ဖို့ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်နိုင်၊ မလုပ်နိုင် သေချာဆန်းစစ် ပြီးတော့မှပဲ စဉ်းစားဖြစ်မယ်။ အစ်မက ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ် ဆိုတာလည်း ရုပ်ရှင်လောကမှာ တောက်လျှောက်ကြီး ရိုက်ပြီးနေခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အနည်းငယ်လောက် ရိုက်ပြီး သီချင်းပဲ ဆိုခဲ့တာဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ အချိန်က တိုပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ်နဲ့ ဦးလေးလို၊ အစ်ကိုလိုခင်ခဲ့တဲ့ သူတွေနဲ့သာ ရိုက်ခဲ့တာ ဆိုတော့လေ။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေကသာ ပြန်ပြီး ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင် အစ်မစဉ်းစား ဖြစ်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဦးမီးပွားတို့ ပေါ့နော်။
Voice ။ ။ ဒီပွဲမှာ ဦးကိုင်ဇာကိုရော ဧည့်သည် အဆိုတော်အနေနဲ့ ခေါ်ဆိုဖို့ ရှိလား။
MS ။ ။ အစ်မကတော့ သူ အချိန်လေးပေးပြီး အစ်မတို့ နှစ်ယောက်ရှိုးမှာ လာ ဆိုပေးမယ်ဆိုရင် Welcome ပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီမှာ မဆိုဖြစ်ဘူးဆိုလည်း နောက်တစ်ခါ ပွဲလုပ်တဲ့အခါ ဆုံကြမှာပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့က ရွယ်တူတွေလည်း ဖြစ်တယ်။ သူ့သီချင်း၊ ကိုယ့်သီချင်းလည်း သိနေကြတာ ဆိုတော့ အချိန်မရွေး အဆင်ပြေပါတယ်။
Voice ။ ။ အစ်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲကို လာရောက် ကြည့်ရှုမယ့် ပရိသတ်တွေ အတွက် ဒီပွဲလေးက ဘယ်လိုရသမျိုး ပေးစွမ်းနိုင်မယ်ထင်လဲ။
MS ။ ။ အစ်မကတော့ ဒီပွဲလေးကို လာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပွဲဆိုပြီး ပီတိလေးနဲ့ ပြန်သွားတာမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်။ သေချာတာကတော့ ဒီပွဲလေးကို အစ်မတို့ အရွယ်တန်း ပရိသတ်တွေပဲ လာကြည့်ကြမှာပါ။ တကယ်လို့ သူတို့ သားသမီးတွေကို ခေါ်ပြီး လာကြည့်တယ် ဆိုရင် တောင်မှ ဒါမေမေတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တွေလို့ ပြောပြီး ခေါ်လာလို့သာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကလေးတွေက လိုက်ချင် လိုက်လာကြမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ပေးပြီး လာကြမယ့်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေမယ့် ပွဲမျိုးဖြစ်အောင် အစ်မတို့ ကြိုးစားမှာပါ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ​မိုးရာသီဖြစ်တဲ့ ​ဇွန်လကနေ ​အောက်တိုဘာလအတွင်း ​မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုတွေ ​ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပေမယ့် ​ခုလို ​ရက်ပိုင်းအတွင်း ​လူ ​၃၀ ​ကျော် ​သေဆုံးတာမျိုး ​မရှိခဲ့ဘူးလို့ ​ဆိုပါတယ်။
မနေ့တုန်းကလည်း ​မိုးကြီး ​လေကြီးမှုတွေ ​ဖြစ်ခဲ့ပြီး ​သစ်ပင်တွေ၊ ​အိမ်တွေနဲ့ ​လျှပ်စစ်ဓာတ်တိုင်တွေ ​ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ​မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ​လူပေါင်း ​၃၀ ​ကျော် ​သေဆုံးခဲ့ရသလို ​တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်း ​Fitow ​မုန်တိုင်းကြောင့် ​လူ ​၃ ​ဦးသေဆုံးပြီး ​အိမ်အလုံးပေါင်း ​၁၂၀၀ ​ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရပိုင် ​မီဒီယာမှာ ​ဖော်ပြချက်အရ ​တစ်နာရီကို ​လေတိုက်နှုန်း ​ပြင်းအား ​၂၀၀ ​ရှိတဲ့ ​မုန်တိုင်း ​ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ​လူပေါင်း ​သိန်းနဲ့ချီကိုလည်း ​ရွှေ့ပြောင်းမှု ​လုပ်နေရပါတယ်။
မုန်တိုင်းကြောင့် ​Zhejiang ​ပြည်နယ်၊ ​Fujian ​ပြည်နယ်နဲ့ ​Jiangxi ​ပြည်နယ်မှာ ​အမြန်ရထားပေါင်း ​၅၉ ​စီးရဲ့ပြေးဆွဲမှုတွေ ​ရပ်တန့်ခဲ့ရပြီး ​လေယာဉ် ​၄၉ ​စီးရဲ့ ​ခရီးစဉ်ကိုလည်း ​ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။
ပင်လယ်ပြင်မှာ ​ရောက်ရှိနေတဲ့ ​လှေတွေ ​ကမ်းကပ်ဖို့ ​သတိပေးချက်တွေကြောင့် ​လှေအစီးပေါင်း ​၆၅၀၀၀ ​ကလည်း ​ပြန်လာခဲ့ကြတယ်လို့ ​သိရပါတယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေစက္ကူ တရာတန်သစ်ကို အခုအင်္ဂါနေ့မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တရားဝင် ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ အခု ငွေစက္ကူ တရာတန်သစ်မှာ အရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ ပြန်တွေ့ရပေမယ့် လို့ ငွေစက္ကူအတုလုပ်မှုတွေ ကာကွယ်နိုင်အောင် ပုံစံသစ်ဆောင်ရွက်ထားတာတွေကိုလည်း တွေ့ရပါ တယ်။
ဒေါ်လာ ငွေစက္ကူတရာတန်ဟာ အမေရိကန်ငွေစက္ကူတွေထဲမှာ ကမ္ဘာဘဏ်တွေမှာ အသုံးအများ ဆုံး ငွေစက္ကူဖြစ်ပါတယ်။ ငွေတန်ဖိုး ၈ ဘီလီယံထဲမှာ တ၀က်ကျော် သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ဟာ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စု ပြင်ပမှာ လည်ပတ်နေပါတယ်။
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ငွေစက္ကူ တရာတန်လိုပဲ အခု အသစ်မှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ် နှစ်ခုလောက် က ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်တော်လှန်ရေးရဲ့ခေါင်းဆောင် Benjamin Franklin ပုံကိုပဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခြားတဘက် မှာတော့ Philadephia မှာရှိတဲ့ လွတ်လပ်ရေး ခမ်းဆောင်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု ငွေစက္ကူသစ်မှာတော့ Franklin ပုံရဲ့ ထောင့်မှာ အင်္ဂလိပ်လို (100) ရေးထားတဲ့ အ၀ါရောင် အကွက်တကွက်ပါရှိပြီး အခြားတဘက်မှာတော့ မှင်အိုးပုံ တံဆိပ်တစ်ခု ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီ မှင်အိုး ပုံထဲမှာတော့ Philadelphia လွတ်မြောက်ရေးခေါင်းလောင်းပုံ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပြာရောင် လုံခြုံရေး ဖဲပြားကြိုး ဒေါင်လိုက်တွေ့ရပြီး အဲဒီအပေါ်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်လို ၁၀၀ ဂဏန်းနဲ့ လွတ်မြောက်ရေးခေါင်းလောင်းပုံလေးတွေ ပါရှိပါတယ်။
Online မှာ လူကြိုက်များနေသော ပုရိသတို့ အမြင်အာရုံ ရင်နှစ်မြွှာကြားရောက်စေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ ခပ်လန်းလန်းပုံများ
Posted by drmyochit Tuesday, October 08, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
ယခုတလော အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ ခပ်ဟော့ဟော့ စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ရင်မြွှာနှစ်ခုအပေါ်က စာတန်းလေးမြင်အောင် ရိုက်ထားတယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ ကြည့်ရသူ ပုရိသတို့အတွက်
ကတော့ စာတန်းမမြင်ဘဲ ရွှေရင်နှစ်မြွှာကြားမှာ အမြင်အာရုံရောက်လို့ အဆိုပါဓာတ်ပုံဟာ
၀တ်မှုန်ကို ချစ်သော ပရိသတ်တွေအတွက် ရင်ခုန်စရာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအဖြစ် လူကြိုက်များလျက်ရှိပါတယ်။